भीमेश्वर मन्दीरकाे शिलामा आयो फेरि पसिना, मुलुकमा अशुभ हुने संकेत, बिगतमा के के भए ? – AB Sansar
November 24, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on भीमेश्वर मन्दीरकाे शिलामा आयो फेरि पसिना, मुलुकमा अशुभ हुने संकेत, बिगतमा के के भए ?
काठमाडौं, ९ मंसिर । दोलखाको भीमेश्वरको शिलामा पसिना आएको छ । सो मन्दीरमा पसिना आए मुलुकमा अशुभ हुने तथा न`रा`म्रा घटनाहरु हुने धार्मिक मान्यताहरु रहेका छन् । यसअघि पनि शिलामा पसिना आउदा देशमा ठूला-ठूला क्ष`ति भएका थिए ।
पछिल्लो पटक मंगलबार आज दिउँसो २ बजेदेखि भीमेश्वरको शिलामा निरन्तर पसिना आइरहेको मन्दीर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरत श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले शिलामा पसिना आएको यो १८ औं पटक भएको बताउनुभयो ।यसअघि शिलामा १७ औं पटक फागुन ८ मा आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि लगत्तै कोरोना महामारीका कारण देशभरी लकडाउन भएको थियो । २०६२\_०६३ को जनआन्दोलन अघि पनि शिलामा पसिना आउको थियो ।
त्यस्तै राजदरबार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि पनि पसिना आएको थियो । त्यस्तैगरि १९९० मा भूकम्प आउनुभन्दा अघि पनि शिलामा पसिना आएको बताइन्छ । मंगलबार पनि शिलाको दायाँ बायाँ दुवै भागबाट पसिना आइरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।लकडाउन पछि नियमित पूजाको लागि खोलिएको मन्दीर एकहप्ता पछि पुन बन्द गरिएको थियो । अहिले सर्वसाधारणका लागि बन्द रहेको छ । तर पसिना आउन थालेपछि चलन अनुसार मन्दीर व्यवस्थापन तथा गुठियारहरुले र स्थानीयले पूजा गरिरहेका छन् ।
पसिना आएपछि क्षमा पूजाको लागि शिलामा आएको पसिना पुछ्ने चलन छ । त्यहाँ पसिना पुछिएको रुवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहवरमा गृहमन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि राजाका पालामा पसिना आउँदा रा`ज`दरबाट क्ष`मा पूजाको लागि पञ्चवली पठाउने प्रचलन थियो ।
महिलालाई पुलिसमा भर्ती गर्दा कु`मा`रि`त्व परीक्षण !
जब गोजीमा पैसा सकिन्छ उमेर कोल्टे फेर्छ तेतिबेला त, आफ्नै श्रीमती को माया लाग्छ ।